जाडोमा बच्चालाई कसरी जोगाउने ? « Nepal Health News
जाडोमा बच्चालाई कसरी जोगाउने ?
२०७५, १३ कार्तिक मंगलवार ११:२५ मा प्रकाशित
भक्तुपरकी सुजिता महर्जनले गत बर्षको जाडोयाममा आफ्नो काम व्यस्तताका कारण नाबालक छोराको हेरचाहामा खासै ध्यान दिन पाइनन् । विहानै डे केयर सेन्टरमा लगेर राख्ने र बेलुका कार्यालयबाट फर्कदा घर लिएर आउने गरेकी उनको छोरालाई रुघाखोकी लाग्न थाल्यो । सामान्य होला भन्दा भन्दै छोरालाई निमोनिया भएर करिव १५ दिन अस्पताल बस्दा कम्ती हेरानी खेप्नु परेन । झन्डै ज्यानै गएन छोराको । यसपालाको जाडोमा भने समयमै होसियार भएर छोराको हेरचाह गर्ने अठोट् गरेकी छन् सुजिताले ।
यो त प्रतिनिधि घटना मात्र हो । जाडोमा राम्रोसँग हेरविचार नपु¥याउँदा चिसोका कारण धेरै बालबालिका बिरामी पर्छन् । कति त अस्पताल नै भर्ना हुन्छन् भने कतिको अकालमा ज्यान जानसक्छ ।
यतिखेर राजधानीलगायत देशभर नै चिसो मौसम बढेको छ । चिसोले सवैलाई प्रभावित पार्ने भएपनि विशेषत बालबच्चा तथा बृद्धबृद्धा बढि जोखिममा छन् ।
‘‘जाडोयाममा बालबालिकाहरुको रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ र रुघाखोकी, श्वास प्रश्वासको समस्या, निमोनिया हुने सम्भावना हुन्छ ।’’
आमाबाबुले बालबच्चालाई सामान्य रुघाखोकी ठानेर ख्याल नपु¥याउँदा कतिपय बालबालिका कडाखालको निमोनियाको शिकार भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा बालबालिकालाई ज्वरो पनि देखिनसक्छ ।
खासगरी जाडो मौसममा ५ बर्षमुनिका बालबालिकामा प्राणघातक रोटा भाइरसको संक्रमण हुनसक्छ । रोटा भाइरस जाडोयाममा सक्रिय हुन्छ । सामान्य खालको झाडापखाला लाग्दा पातलो दिसा आउने जस्तो लक्षण देखिने यस किसिमको समस्यामा तारन्तार बान्ता हुन्छ । यद्यपी सामान्य हेलचेत्र्mयाइले बालबालिकाको जानसक्छ ।
रोटा भाइरसबाट जोगाउन चिसो लाग्न नदिने, व्यक्तिगत सरसफाइ तथा खानपानमा ध्यान दिन जरुरी छ । प्रशस्त मात्रामा जीवन जल, जिंक चक्की खुवाउनुपर्छ । पटक पटक बान्ता भइरहेमा चिकित्सकको सल्लाहअनुसार स्लाइन समेत दिनुपर्छ ।
बालबालिकाको खोप तालिका अनुसार खोप लगाउन विर्सनुहुँदैन । बालबालिकाको उमेर अनुसार उचाइ, तौल तथा अन्य शारीरिक मानसिक विकास भए नभएको बारे ध्यान दिनुपर्छ । रोगको शंका लागेमा तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याउनुपर्छ । जाडोयाममा बच्चाहरुलाई जोगाउन निम्न कुराहरुमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।
पर्याप्त मात्रामा सुताउने
बालबालिकाको रातको समयमा सुतेको बेलामा शारीरिक विकास हुने भएकाले पर्याप्त मात्रामा सुताउनुपर्छ । उनीहरुलाई कम्तिमा १२ घण्टा सुताउनु आवश्यक हुन्छ ।
झोलिलो तथा फलफुल खुवाउने
बालबालिकालाई चिसो लाग्ने भयले जाडोयाममा फलफूल खुवाइँदैन । तर यो भ्रम मात्र हो । बालबालिकालाई मौसम अनुसारको फलफूल खुवाउन जरुरी हुन्छ । फलफूललाई तातो पानीले धोएर खुवाउनुपर्छ । यसका साथै पर्याप्त मात्रामा तातो पोषिलो रस पनि खुवाउनुपर्छ । मनतातो पानी खुवाउनुपर्छ ।
जाडोयाममा बालबालिकालाई घाममा राख्नुपर्दछ । घाममा राख्ने भन्दै विहानको चिसो समयमा राख्नुहुँदैन । यो मौसममा १० बजेपछि १ बजेसम्मको घाममा राख्दा राम्रो मानिन्छ । घामबाट प्रशस्त भिटामीन डी पाइन्छ । घाममा राखेर तोरीको तेल लगाइदिएमा लाभदायक मानिन्छ । तर तेल लगाइदिँदा संवेदनशील अङ्ग जस्तै कान, नाइटो, नाक, आँखाहरुमा ध्यान दिनुपर्छ र हात खुट्टाहरु कमजोर हुने हुँदा जथाभावी मार्याकमुरुक पार्नुहुँदैन ।
आवश्यक न्यानो कपडा लगाइदिने
बालबालिकालाई धेरै बाक्लो कपडा नभई न्यानो कपडा लगाइदिनुपर्छ । आवश्यक भन्दा धेरै बाक्लो लुगाले बालबालिका गुम्सेर पसिना आउँछ र पसिना शरीरमा सुकेमा विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्या देखिन थाल्छन् । साना बच्चाहरुलाई कपास भएको लुगा लगाएमा कपडाले पसिना सोच्छ र बारम्बार चिसो भइरहन्छ । पसिना आएको थाहा पाएपछि भित्री कपडा परिवर्तन गरिदिनुपर्छ ।
बालबालिकाको सरसफाइमा ध्यान पु¥याउन सकेको अवस्थामा धेरै रोगबाट जोगाउन सकिन्छ । चिसो लाग्ने डरले जाडोयाममा लामो समयसम्म ननुहाइ राख्न हुँदैन । नियमित सरसफाइमा ध्यान दिएमा रुघाखोकी र खटिराजन्य संक्रमणबाट जोगाउन सकिन्छ । साबुन तथा सेम्पु प्रयोग गरेर राम्ररी पखालिदिनुपर्छ । त्यसैगरी आमाले पनि शारीरिक सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ । आमाको संक्रमण बालबालकालाई पनि सर्ने सम्भावना रहन्छ । स्तनपान गराउने आमाले स्तनको मुन्टा (निप्पल) राम्ररी सफा गरेर राख्नुपर्छ ।
हिटर तथा आगो ताप्दा ध्यान दिने
बालबालिकालाई न्यानो पार्न विजुलीको हिटर ताप्न राम्रो मानिन्छ । तर मट्टितेल हिटर, ग्याँस हिटर तथा कोइला बालेर ताप्दा विशेष ध्यान दिनु पर्छ । कोठाको भेन्टिलेसन खोल्नुपर्छ । सुत्ने बेला बालेर सुत्नुहुँदैन किनभने कहिलेकाँही कोठामा अक्सिजन कम भएर सुतेको बेलामा नै मृत्यु हुनसक्छ ।
बालबालिकालाई चिसो लागेमा घरेलु व्यवस्थापन
-प्रशस्त आराम दिने
– बाफ लिन लगाउने
– प्रशस्त झोलिलो खुवाउने
– मनतातो पानीमा १ चम्चा मह हालेर खुवाउने
– नुन पानीले कुला गर्ने
-तोरिको तेलले मसाज गर्ने
बालबालिकालाई चिसो लागेका लक्षण
– रुघाखोकी लाग्ने
– सिँगान बगिरहने
– टाउको दुख्ने
– झाडापखाला र निरन्तर वान्ता हुने
– घाँटी दुख्ने
– हाँच्छ्यु गरिरहने
– थकाइ लाग्ने
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ असोज २९ । देशका सबै स्थानीय तहले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँगको समन्वय
सुन्दा पिसाब । तर विभिन्न रोगको पहिचानका लागि पिसाबको जाँच अनिवार्य हुन्छ । पिसाबको
जंक फुड खुवाएर आफ्नो सन्तानलाई धोका दिँदै हुुनुहुन्छ कि ?
काठमाडौँ, असोज १७ गते । बालबालिकाले खाना खाँदैन भनेर जङ्क फुड अर्थात् पत्रु खाना खुवाउनु
विश्व मुटु दिवस २०१९: मेरो प्रतिज्ञा स्वस्थ्य मुटु, यसरी बन्न सक्छौं हामी हार्ट हिरो
जनस्वस्थ्य सरोकार, असोज १२ गते, काठमाडौं। आज विश्वको नम्बर एक हत्यारा मुटु रोग भएको छ